शब्द को महत्व — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
शब्द को महत्व
शब्द महत्त्वपूर्ण छन्. हामी शब्दहरू हाम्रो मित्र र परिवारका साथ संवाद प्रयोग. हामी व्यापार सञ्चालन गर्न हाम्रो शब्दहरू प्रयोग. म गीतहरू सँगै राख्न र जीवित बनाउन शब्दहरू प्रयोग. हामी हाम्रा छोराछोरीको अनुशासन शब्दहरू प्रयोग. राजनीतिज्ञ तिनीहरूले काम को लागि सबै भन्दा राम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनेर तपाईं विश्वस्त शब्दहरू प्रयोग. शब्द हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा एक विशाल भाग हो. म एक नयाँ छोरा छ. यो एक व्यक्ति सात हप्ता पुरानो संग बस्न गाह्रो छ, तिनीहरूले कुरा गर्न सक्दैन किनकि. त्यसैले कहिलेकाहीं म उसलाई मदत गर्न चाहनुहुन्छ तर थाहा छैन किनभने उहाँले अझै शब्दहरू सञ्चार गर्न सक्दैन कसरी. यो शब्द संसार कल्पना गर्न गाह्रो छ.
औसत व्यक्तिको बारेमा भन्छन् 16,000 एक दिन शब्दहरू. त्यो हो 112,000 हरेक हप्ता शब्दहरू. हरेक वर्ष पाँच लाख शब्दहरू पूरा. हामी शब्दहरू प्रयोग. धेरै.
अनि त्यहाँ धेरै भन्ने केहि undervalued गर्न सुरु. केहि को मूल्य छ यो कति आधारित परिवर्तनहरू. जब छन् 100 सेवा पछि तालिका कुकीहरू तपाईं एक समय को लागि कुरा राखन सक्छ. तर केवल केही कुकीहरू त्यहाँ हुँदा, उनि बहुमूल्य जस्तो. तपाईं शायद वहाँ हतार छौँ र यदि तपाईं समय मा एक प्राप्त, कि खानको धेरै sweeter छ. हामी सुन्न र यति धेरै शब्दहरू हरेक दिन प्रयोग किनभने तिनीहरूले हामीलाई धेरै अर्थ छैन. तर हामी अनमोल रूपमा हेर्न गर्नुपर्छ.
शायद हामी मात्र लाग्छ हामी भन्न साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुराहरू महत्वपूर्ण छन्. शायद हामी तल मात्र के लेख्न लाग्छ, वा हामी groundbreaking, कुराकानी वा हुँदा मात्र मात्र हामी साँच्चै लाग्छ के हाम्रो शब्दहरू फरक भन्नुहोस्. म हाम्रो पद आज राती धेरै फरक कुरा संचार लाग्छ. मत्ती मलाई साथ गर्नुहोस् 12:36.
तर मैले मानिसहरूलाई तिनीहरूले बोलेको छु हरेक लापरवाह शब्द को लागि न्यायको दिन मा खाता दिन हुनेछ भनेर तपाईं बताउन. (मत्ती 12:36)
येशूले फरिसीहरूलाई संग कुराकानी को बीचमा यी शब्दहरू भन्छन्, तिनीहरूले शैतानले दुष्ट बाहिर कास्टिंग को उहाँलाई दोष पछि. र यति येशूले मूलतः तिनीहरूलाई तिनीहरूले दुष्ट हुनुहुन्छ भनेर बताउँछ, र राम्रो केहि छैन भन्न सक्छौं (उहाँले शब्दहरू एक प्रकारको तरिका छ). उहाँले हाम्रो वचन सबै हाम्रो हृदयमा मूल लिएको के को फल हो भनेर तिनीहरूलाई यसो भन्छन्.
अनि त्यसपछि उनले त्यो बम खस्छ हामीलाई. त्यो हामी बोल्न हरेक लापरवाह शब्द को लागि परमेश्वरको जवाफ हुनेछ. यो केवल फरिसीहरूले लागू हुँदैन. यो हामी हरेक एक एक साँचो हो. र निम्न पद पनि थप भयावह छ. उस्ले भन्यो, "आफ्नो शब्द द्वारा लागि तपाईं acquitted गरिनेछ, र आफ्नो शब्द द्वारा तपाईं दोषी हुनेछ। " तर किन? हाम्रो शब्दहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्? हामी किन acquitted गरिनेछ वा हामी भन्न शब्दहरू रूपमा तुच्छ कुरा आधारित निन्दा?
उहाँले स्पष्ट पहिले उहाँले गर्दा भन्छन् कि बनाउँछ, "मुख बोल्छ हृदयका ओभरफ्लो बाहिर।" के तपाईं कहिल्यै अन्याय न्याय महसुस गरेका छन्? कसैले मा खराब दिन तपाईं पक्रेको जस्तै तपाईं पागल थिए र एक दिन आफ्नो सम्पूर्ण वर्ण न्याय गर्दा? खैर हाम्रो शब्दहरू न्याय भइरहेको जस्तो छैन. यसलाई मन शब्दहरू केवल एउटा हामीलाई परिभाषित छैन भन्ने हाम्रो चरित्र को पक्ष हो. तिनीहरूले हाम्रो हृदयमा भइरहेको छ के को सही विचार हो किनभने हाम्रो शब्दहरू हामी सही न्याय गर्न सकिन्छ.
यो म एक कप समातेर छु लगभग जस्तै छ, तपाईं त्यहाँ के थाहा छैन. म तिमीलाई सक्छ पानी त्यहाँ छ, वा रस त्यहाँ छ. तर म यात्रा र छप वा त्यो पेय केही फैल भने, तपाईं त्यहाँ छ ठ्याक्कै थाहा छौँ. यो हाम्रो शब्द र हाम्रो मन संग नै छ. जब हामी बोल्न, हाम्रो हृदय सामग्री बाहिर spilling छ. हाम्रो हृदयमा के हाम्रो बोली सधैं देखाउन, राम्रो वा नराम्रो कि. र पावलले Tripp रूपमा, एक लेखक म यो हप्ता पढ्न, भने, "तपाईं कहिल्यै आफ्नो जीवन मा एक तटस्थ शब्द बोलेको छु."
हाम्रो शब्द लागि जवाफदेही आयोजित
हरेक अब र फेरि कसैले सार्वजनिक तिनीहरूले कहिल्यै भन्नुभयो थियो केहि भन्दै टेप मा समातिए हुनेछ. उहाँले रूस को राष्ट्रपति कुरा थियो जब यो राष्ट्रपति ओबामा भयो. यो गत हप्ता पन्जा Romney भयो. तिनीहरूले ती शब्दहरू लागि जवाफदेही आयोजित हुने आशा थिएन, तर तिनीहरू. त्यसै गरी, हामीले बोल्न केही शब्दहरू लागि जवाफदेही आयोजित हुनेछैन लाग्छ. हामी कुरा भन्न लाग्छ, र it's गरेको, तर तिनीहरूले हामीलाई दु: ख गर्न आउनेछ. परमेश्वरले सबै सृष्टि भन्दा लुकेका क्यामेरा छ भने यो हो.
त्यहाँ एक दिन छ - पाठ यो भनिएको न्यायको दिन - हामी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पवित्र न्यायाधीश खडा हुनेछ जब. र हामी हाम्रो शब्दहरू साक्षीको रूपमा खडा बेला हुनेछ - या त हाम्रो लागि वा हामी विरुद्ध testifying. प्रमाण प्रस्तुत गरिनेछ.
परमेश्वरले हामी वयस्क हाम्रो spouses वा मालिकहरुलाई कुरा हामी एक बच्चाको रूपमा हाम्रो आमाबाबुले कुरा बाटो र बाटो हेर्न हुनेछ. परमेश्वरले हामी सडक मा अपरिचित कुरा बाटो छलफल गर्नेछन्. परमेश्वरले हामी हाम्रो सह-श्रमिकहरुलाई भन्नुभयो Jokes छानबिन हुनेछ. परमेश्वरले हाम्रो क्रोधित rants मार्फत यातायात काम गर्न ड्राइभमा comb हुनेछ. उहाँले पनि फेसबुक र ट्विटर मा हामी टाइप के स्क्रोल छौँ. पनि शब्दहरू हामी पाठ सन्देशहरू वा इमेल मा पठाउन. हरेक एक शब्द.
के तपाईं येशू हामी बोल्न महत्वपूर्ण शब्द लागि खाता दिन हुनेछ भन्न गर्दैन नोटिस. उस्ले भन्यो, "हरेक लापरवाह शब्द।" लागि प्रयोग गरिएको शब्द लापरवाह पनि निष्क्रिय वा बेकारी रूपमा अनुवाद गरिएको छ. हरेक शब्द, कुनै कुरा तपाईं कसरी नगण्य यो छ लाग्छ. सबै-थाह परमेश्वरले हामी यो बिहान बारेमा कुरा, हामी कहिल्यै बोलेको गर्नुभएको हरेक शब्द थाह.
र यहाँ कुरा हो. केवल एक अभक्त शब्द हाम्रो निन्दा गर्न पर्याप्त छ. पाठ्यक्रम हालतमा कुन, हामी सबै हाम्रो शब्दहरू लागि दोषी गर्नुपर्छ.
खैर तीन शब्द छन्, प्रभु येशू ख्रीष्टले uttered, कि म कहिल्यै बोलेको गर्नुभएको हरेक लापरवाह शब्द हटाउनुहोस्. ती तीन शब्द "यो हो. छ. सकियो। "सिद्ध जीवन बस्थे पछि, पछि मात्र परमेश्वरले महिमा तरिकामा आफ्नो शब्द प्रयोग, येशू क्रूसमा गए. र त्यो क्रूसमा हङ गर्दा, उहाँले हाम्रो बोली पापको लागि पनि मृत्यु. र उनले तीन दिन पछि गुलाब.
र ख्रीष्टमा हाम्रो विश्वास गर्ने हामी ती लागि, हो, त्यहाँ हामी बोली गर्नुभएको edifying शब्दहरू ख्रीष्टसित हाम्रो सम्बन्ध को फल हो भनेर छन्. अनि ती शब्दहरूबाट हाम्रो पक्षमा पुष्टि हुनेछ. तर हामी अझै पनि अन्य सबै शब्द निन्दा हुनेछ. र प्रशंसा परमेश्वरले प्रभु येशूको रगतले ती शब्दहरू कवर. यदि तपाईं येशू थाहा छैन, मात्र एक मा आफ्नो पाप र भरोसा तर्केर तपाईं आफ्नो पाप को लागि क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो बोली पापको सहित.
विश्वासीहरूलाई ताकि, हामी हाम्रो शब्दहरू लागि दोषी हुनेछ हुनत, हामी अझै पनि तिनीहरूलाई लागि जवाफदेही आयोजना छौँ. हामी अझै पनि तिनीहरूलाई लागि परमेश्वरको जवाफ छ छौँ र हामी स्वर्ग मा पुरस्कार गुमाउन सक्छ.
हामीलाई केही हाम्रो पैसा धेरै होसियार छन्. हामी बजेट बनाउन, हामी हाम्रो checkbooks सन्तुलनमा, हामी हाम्रो रसिद राख्न, र हामी हाम्रो अनलाइन बिलिङ बयान हेर्न. हामीलाई थाहा छ किनभने धेरै खम्बा छ. हामीलाई थाहा छ हामी राम्रो हाम्रो पैसा भण्डारे छ.
carefulness राम्ररी त्यही प्रकारको, र गणना हामी हाम्रो शब्दहरू प्रयोग बाटो लागू गर्नुपर्छ. धेरै खम्बा छ किनभने. र हामी हाम्रो शब्दहरू हरेक एक लागि परमेश्वरको जवाफ हुनेछ. हामी प्रयोग शब्द राम्रो भण्डारेहरूको हुनुपर्छ.
हाम्रो शब्दहरू hammers जस्तै हो. हामी बेतहाशा तिनीहरूलाई वरिपरि स्विंग र सामान विच्छेद गर्न. वा हामी उनलाई ध्यान सामान निर्माण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं कसरी आफ्नो शब्दहरू यो हप्ता प्रयोग गर्नेछ? हामी हाम्रो शब्दहरू कसरी प्रयोग यो गत हप्ता शायद हामी कसरी तिनीहरूलाई आ यो हप्ता प्रयोग हुन सक्छ हामीलाई देखाउने, केही परिवर्तनहरू नभएसम्म.
त्यसैले हामी राम्रो हाम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्न सक्ने तीनवटा तरिका दिन चाहनुहुन्छ.
म. परमेश्वरको कुरा
को 16,000 शब्दहरू हामी हरेक दिन प्रयोग, परमेश्वर कुराकानीमा ती धेरै प्रयोग बुद्धिमानी हुनेछ. येशूले पिता हामीलाई पहुँच दिइएको छ, र हामी अक्सर उहाँको सिंहासन अघि साहसी भई आउनु पर्छ. हाम्रो spouses हुनुको राम्रो श्रोता समस्या हुन सक्छ, तर परमेश्वरले गर्दैन. उहाँ सधैं हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ. वास्तबमा, उहाँले धेरै नजिकबाट सुन्नुहुन्छ.
हामी कठिन कुरा मार्फत जाँदै हुनुहुन्छ अक्सर गर्दा, हामीले पहिलो कुरा केवल परिवार को मित्रहरुलाई निकास छ. या शायद हामीले यसलाई बारेमा चर्को आफूलाई गर्न rant. शब्दहरू के बर्बादी. अझै पछिल्लो सप्ताह, म साँच्चै मलाई चिंता सता थियो भन्ने कुरा बारे मेरो पत्नी गर्न उजुरी थियो र म चिन्तित थियो. र अघि सहमत वा कुनै पनि सल्लाह भेटी, त्यो बस मलाई बस आग्रह, "तपाईं यसको बारे प्रार्थना गरिएको छ?"अनि जवाफ कुनै थियो. म यसको बारेमा परमेश्वरको कुरा छ चाहिए. त्यो मेरो शब्दहरू सम्म राम्रो प्रयोग भएको थियो.
अक्सर venting हामीलाई madder बनाउन भन्दा केही बढी गर्छ. यो कहिलेकाहीं शब्दहरू बर्बादी हो. तर परमेश्वरले कुरा कहिल्यै शब्दहरू बर्बादी छ. तपाईंको शब्दहरू कुनै राम्रो प्रयोग हो. हामी नियन्त्रणमा हुनुहुन्न, तर उहाँ. त्यसैले जब हामी सहायता आवश्यक, बरु बस पागल हुनुको, हामी सिर्फ आरोप मा छ जो एक कुरा गर्नुपर्छ. र यदि यो हाम्रो लागि र उहाँको महिमा लागि राम्रो, उहाँले हामीलाई हाम्रो अनुरोध प्रदान गर्नेछ.
हामीलाई केही confrontational हुन सक्छ. र हामी कसैले समस्या छ जब, हामी यसलाई हेरचाह गर्न व्यक्ति दायाँ जानुहोस्. हामी अवस्था बारे परमेश्वरको कुरा अन्य व्यक्ति कुरा अझ महत्वपूर्ण र प्रभावकारी छ कि सम्झनुपर्छ. तपाईं अन्य व्यक्ति कुरा अघि आफ्नो संबंधात्मक विवादहरूको परमेश्वरको कुरा. सहायता र अनुग्रह र बुद्धिको लागि उहाँलाई सोध्न. तपाईं सचेत आफ्नो सृष्टिकर्ता कुरा को वजन तपाईं थप स्पष्ट विचार मदत अनुमति र.
र हामी मात्र सामान लागि परमेश्वरको सोध्न हाम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ. हामी हरेक आइतबार बिहान प्रशंसाको एक प्रार्थना छ किन यो छ. हामी सिर्फ उहाँलाई केही समय प्रशंसा गर्नुपर्छ. हामी उहाँको प्रशंसा गाउन अनुपम तरिका संग आ गर्नुपर्छ. बस भन्दा बढी, "उहाँले राम्रो छ. तपाईं परमेश्वरको धन्यवाद। "परमेश्वरको प्रेम संग संतृप्त छ हृदय नयाँ तरिका र हरेक दिन परमेश्वरको प्रशंसा गर्न नयाँ कारण पाता. उहाँले हाम्रो प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ.
द्वितीय. सुसमाचार भन्नुहोस्
म अर्को व्यक्ति बताउन राम्रो केहि विचार गर्न सक्दैन, सुसमाचार भन्दा. परमेश्वर आफ्नो छोरालाई येशू ख्रीष्ट मार्फत यी आखिरी दिनमा बोली छ. र हामी उहाँलाई अरूलाई बताउने गर्नुपर्छ र उहाँले के गर्नुभएको गर्नुपर्छ.
रोमी 10 हामीलाई बताउँछ, "विश्वास सुनेपछि र ख्रीष्टको वचन मार्फत सुनेपछि मार्फत आउँछ।" यो परमेश्वरको पुरुष र महिला कसरी बचाउँछ छ. जब तिनीहरूले सुसमाचार सुन्न र विश्वास गरेर प्राप्त.
म चाहन्छु के व्यक्ति आफ्नो जीवनमा सुसमाचारको सुन्न आवश्यक बारेमा एक पल को लागि सोच्न. यो एक परिवार सदस्य छ, एक सहयोगी, छिमेकी, हजामको, एक डाक्टर? आफ्नो जीवनमा के व्यक्ति सुसमाचारको सुन्न आवश्यक?
हाम्रो गैर-मसीही साथीहरूसँग सम्बन्ध र साधारण भूमि निर्माण गर्ने हाम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्न को लागि यो राम्रो. तिनीहरूलाई तपाईंले तिनीहरूलाई ख्याल थाहा लागि यो राम्रो. हामी कहिल्यै वास्तवमा तिनीहरूलाई सुसमाचारको साझेदारी गर्न वरिपरि यदि तर यो विनाशकारी छ. हामी थियो भने यो विनाशकारी हुनेछ 10 राजनीति बारे कुराकानी, तर सुसमाचारको बारेमा एक. हामी खेल बारे साप्ताहिक कुराकानी यदि यो विनाशकारी हुनेछ, तर येशूको बारेमा कुनै पनि कुराकानी भएको थियो कहिल्यै. र म कुरा गर्दै छु.
हालै, म परिवारका सदस्यहरूले मर्न थियो. र जब हुन्छ, यो मलाई सम्झना दिलाउँछ, केही समय छ कि यो प्रतीक्षा राम्रो, तर कहिले काँही म अहिले येशूको बारेमा मान्छे बताउन आवश्यक. मलाई थाहा मेरो अनाज्ञाकारिताले परमेश्वरको योजना विफल पार्न सक्दैन, तर होइन म अनाज्ञाकारी हुनुपर्छ. र सबै हालतमा, आत्मा को अग्रणी पालना, तर तिनले कि अब भने गर्न आवश्यक सामान राख्न हामीलाई जान्छ कहिल्यै भनेर थाह. सुसमाचार भन्नुहोस्.
यो गैर-मसीहीहरूले हाम्रो मात्र अन्तरक्रिया हुनुपर्छ होइन. तर यो हुन आवश्यक मतलब. शायद हामी चर्च तिनीहरूलाई ल्याउन र यसको बारेमा कुरा गर्न प्याड एउटा सुरुवात रूपमा प्रवचन प्रयोग गर्नुपर्छ. शायद हामी एक राम्रो किताब वा सीडी सुसमाचारको वार्ता भनेर तिनीहरूलाई दर्शाउन (ahem, मेरो). सुसमाचारको बताउन एक बाटो पत्ता.
III. निर्माण माथि अरूले (जी- अनुग्रह)
कुनै पनि अस्वस्थकर कुरा आफ्नो मुख बाहिर आओस् गर्छन्, तर केवल कुरा अरूलाई निर्माण तिनीहरूको आवश्यकता अनुसार लागि उपयोगी छ, कि जसले सुन्न ती लाभ उठाउन सक्छ. (एफिसी 4:29)
अन्य मानिसहरूलाई हाम्रो शब्दहरूको लागि समग्र गाइडिंग सिद्धान्त हुनुपर्छ. केवल कुरा अरूलाई निर्माण अप लागि उपयोगी छ. जस्तै म पहिले भन्यो, हाम्रो शब्दहरू hammers जस्तै हो. हामी सामान तोड्न वा सामान निर्माण गर्न सक्छन्. र अरूको निर्माण गर्न तरिकामा टन छन्.
येशूले हामीलाई एक्लै रोटी बन्द बाँच्न गर्दैन मानिस बताउँछ, तर परमेश्वरको मुखबाट आय हरेक शब्द. परमेश्वरको बहुमूल्य शब्दहरू बोलेको छ. र हामी प्राप्त हरेक मौका आपसमा ती बहुमूल्य शब्दहरू प्रतिध्वनियन हुनुपर्छ.
एउटा तरिका प्रोत्साहन छ. म यो कुरा CHBC असाध्यै राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ. यो वास्तवमा हामी पहिलो आउँदा बन्द गार्ड मलाई र मेरी श्रीमती समातिए. "तिनीहरू केवल मैले सोधें प्रश्न बारेमा मलाई प्रोत्साहन गरे?"मुनि यो प्रोत्साहन affirmation छ. अरूलाई अभिवचन. तपाईं आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रहको साक्ष्य हेर्न हुँदा तिनीहरूलाई भन्नुहोस्. तिनीहरूलाई तपाईंको प्रेम अभिवचन. तिनीहरूलाई परमेश्वरको प्रेम अभिवचन.
अर्को तरिका एक अर्को चुनौतीपूर्ण छ. हामी विचार हुँदैन "निर्माण अप" अर्थ प्यारा जस्तै, प्रेरणादायक Sounding शब्दहरू. कहिलेकाँही हप्काउनुभएको जस्तो देखिन्छ निर्माण, वा सुधार. कहिलेकाहीं यो पाप को पश्चात्ताप गर्न एक भाइ वा बहिनी चुनौतीपूर्ण र तिनीहरूलाई कल जस्तो देखिन्छ. राम्रो समय र कुनै न कुनै समयमा मार्फत प्रत्येक अन्य हिंड्न - यो हामी के गर्न आपसमा प्रतिबद्धता गरेका कुराहरू एउटै हो.
अनि हामी अहिले एक चर्च रूपमा tumultuous समय मार्फत जाँदैछ के. अनि हामी प्रोत्साहन र चुनौतीपूर्ण शब्दहरू दुवै आवश्यक. सुसमाचारको पुस्तकमा आफ्नो भाइबहिनीहरू प्रोत्साहन. परमेश्वरको सार्वभौमिकताको र उहाँको भलाइ र उहाँको प्रतिज्ञा तिनीहरूलाई सम्झाउनुहोस्. र पनि आफ्नो भाइबहिनीहरू विश्वासको असल लडाइँ लड्न चुनौती, येशूले भरोसा लागिरहने. हामी आवश्यक.
तपाईं अरूको निर्माण गर्न सक्छन् अर्को तरिका राम्रो सल्लाह दिएर हो. सबैभन्दा परिपक्व निर्णय निर्माता अलगाव मा निर्णय नगर्ने ती हुन्. आफ्नो भाइ वा बहिनी जीवन मा जा के बारे सुन्न उपलब्ध. र तिनीहरूलाई परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रतिक्रिया हुनेछ कसरी मार्फत लाग्छ मदत. र बाइबलीय सल्लाह.
एकातिर, एक चर्च रूपमा, हामी राम्रो आध्यात्मिक कुराकानी भएको एक राम्रो काम. अर्कोतर्फ, हामी येशूको भन्दा अन्य कुराहरू बारेमा कुरा गर्न डराउनु हुँदैन. हामी जीवनको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, र हामी खेल बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, बस परमेश्वरको महिमा गर्छ तरिकामा त्यसो.
तपाईं केही अरूलाई थप कुराकानी सुरु गर्न आवश्यक धेरै कुरा रोक्न आवश्यक र. हामीलाई केही सुन्न छरितो हुन आवश्यक. हामीलाई केही कुनै शब्द प्रयोग कहिल्यै. अनि हामी थप के गर्न आवश्यक. बोल न. परमेश्वरले तपाईंको जीवनमा काम गरिरहेको छ र हामी यसको बारेमा सुन्न चाहनुहुन्छ. तिमीहरूको सबै शब्द प्रेम विशेषता हुन. मेरो प्रार्थनाको CHBC मायालु शब्दहरू विशेषता एक चर्च भनेर छ.
के तपाईं आज राती सुनेको के लागू गर्ने कोसिस रूपमा, बस तपाईं भन्न के को ट्रयाक राख्न प्रयास र राम्रो गर्न प्रयास को गलती छैन. बस मात्र बाहिर यो निपटने छैन.
हामी पाठ सुरुमा हेर्न रूपमा, के हाम्रो हृदय मा भण्डार गरिएका बाहिर आउँछ. हामी विचार हुँदैन त्यहाँ हृदय र जिब्रो बीच एक विच्छेदन छ. त्यसैले आफ्नो हृदय मा राम्रो कुरा माथि भण्डारण र तिनीहरूलाई ओभरफ्लो हेर्न. र हामी त्यसो गर्दा, यहाँ हामी हाम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुपर्छ कस्तो छ.
तपाईंको शब्दहरू हेर्न वास्तविक तरिका किनभने तिनीहरूले आपसमा सम्बन्धित छन् आफ्नो हृदय हेर्न छ. त्यहाँ जिब्रो गर्न हृदय देखि एक प्रत्यक्ष लाइन छ. आफ्नो हृदय हेर्नुहोस्, र गरेर, तपाईंको शब्द हेर्न. अनि वचन हेर्दै यो सबै के.
francismewa • नोभेम्बर 22, 2014 मा 3:10 छु • जवाफ
शब्दहरू मूल्य पढ्न राम्रो . म यो बाट राम्रो कुरा उद्धृत गरेका छन् , राम्रो शब्द लागि धन्यवाद
उन्मत्त • फेब्रुअरी 3, 2015 मा 3:43 छु • जवाफ
यो अत्यन्तै उत्कृष्ट छ. मात्र सबैलाई पढ्न भने, बुझ्न र नियम पालना, संसारमा बाँच्न राम्रो ठाउँ हुनेछ.
मुस्कान • अक्टोबर 24, 2015 मा 9:22 छु • जवाफ
हामी शब्दहरू धेरै प्रयोग
रीता • नोभेम्बर 4, 2015 मा 4:25 बजे • जवाफ
यो मेरो लागि समय पाठ मा एक थियो. यस बारे बाइबल अध्ययनमा धेरै विषय आज राती कुरा थिए. आफ्नो वेबसाइट मलाई चित्रकला लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद र स्पष्ट र सजिलै बुझ्ने थियो कि एक तरिकामा उहाँको वचन व्याख्या गर्न प्रयोग परमेश्वरलाई धन्यवाद.
परमेश्वरले आफ्नो सेवा आशिष् दिनुहुन्छ!
बारबरा • फेब्रुअरी 5, 2016 मा 6:03 बजे • जवाफ
शब्द साँच्चै महत्त्वपूर्ण छन्. राम्रो जानकारी. परमेश्वरले मलाई शब्दहरू महत्त्व अरूलाई सिकाउन एक सेवाको दिइएको छ लागि कृपया समय मेरो वेबसाइट भ्रमण गर्न लिन.
उल्लेख: शब्द कम्तिमा आधा मानव वास्तविकता हो छैन भन्दा यदि
उल्लेख: 2016 समीक्षा मा – मेरो नौकरी शिकार अनुभव | को SharePoint प्रभाव
उल्लेख: शब्द – केरा Wifey
उल्लेख: प्रचार / सम्झनामा / जेम्स3/ वचन को शक्ति